Kuthetha ntoni "Ukuba kunye Nokuba Kuphela" kuthetha?
Xa ufunda malunga namanani kunye nemathematika, ibinzana elinye elibonisa rhoqo "ukuba kwaye kwaye kuphela." Le binzana ibonakala ngokukodwa kwiingxelo zemathematika okanye iziqinisekiso. Siza kubona ngokuchanekileyo ukuba lithini le ntetho.
Ukuqonda "ukuba kwaye kwaye kuphela" kufuneka siqale sisazi ukuba kuthini isitatimende esinemeko . Isitatimende esinemiqathango sinokuvela kwezinye izitatimende ezimbini, esiza kuthethwa ngo-P no-Q.
Ukwenza isitatimenti esinemiqathango, sinokuthi "Ukuba P ngoko Q."
Oku kulandelayo imimiselo yolu hlobo lwengxelo:
Ukuba ivula ngaphandle, ngoko ndiyithathe i-ambulera yam kunye nam ekuhambeni kwam.
Ukuba ufunda kanzima, uya kuzuza iA.
Ukuba n iyahlukana ngu-4, ngoko-ke iyahlukana ngo-2.
Ukuxoxa kunye nemiqathango
Ezinye izitatimende ezintathu zihambelana nantoni na. Ezi zibizwa ngokuba yi- interverse, inverse and contrapositive . Senza ezi nkcazo ngokutshintsha umyalelo weP kunye noQuqule kwi-original condition kwaye ufaka igama "kungekhona" ngenxa yezinto ezingenanto kunye nezingavumelaniyo.
Sifuna kuphela ukuqwalasela ukuthetha apha. Le nkcazo ifumaneka kwi-original ngokuthi, "Ukuba u-Q ke P." Mhlawumbi siqala ngemeko "Ukuba imvula ingaphandle, ndiyithathe i-ambrala yam kunye nokuhamba kwam" Ukuthetha kwesi sikhoti kukuba: "Ukuba Ndiyithatha i-ambulera yam ekuhambeni kwam, ngoko kuvula ngaphandle. "
Sifuna kuphela ukuqwalasela lo mzekelo ukuba siqaphele ukuba imimiselo engundoqo ayifani ngokufanayo nokuthetha kwayo. Ukudideka kwezi fom zimbini ziyaziwa njengephutha lokuthetha . Omnye unokuthatha i-ambrala ekuhambeni nangona kungenakalila ngaphandle.
Ngomnye umzekelo, sicinga ngolu hlobo "Ukuba inombolo iyahlukana ngu-4 ke iyahlukana yi-2." Le nkulumo icacile ngokuqinisekileyo.
Nangona kunjalo, le ntetho iyathetha "Ukuba inani liyabonakala ngo-2, ngoko likwahlukana ngu-4" linyani. Sifuna kuphela ukubheka inombolo efana no-6. Nangona i-2 ihlula le nombolo, 4 ayikho. Ngelixa ilizwi eliyimvelaphi liyinyaniso, ukuthetha kwayo akusiyo.
Oku kusilethela kwisitatimende se-biconditional, esaziwayo nje ukuba ngaba kwaye kuphela xa kukho ingxelo. Iingxelo ezithile ezinemiqathango zixoxwa ngazo. Kule meko, sinokuyifumanisa into eyaziwa njenge-biconditional statement. Isitatimende esicacileyo sinefomu:
"Ukuba u-Q ngoko Q, kwaye ukuba i-Q ke P."
Ekubeni lo lwakhiwo luba nzima, ingakumbi xa i-P ne-Q ziyizo zengxelo zabo ezinengqiqo, senza lula inqaku le-biconditional ngokusebenzisa ibinzana elithi "ukuba kunye nokuba kuphela." Kunokuba uthi "ukuba u-Q ke ngoko, kwaye ukuba u-Q ke ngoko "Kunoko sithi" P xa kwaye kuphela xa u-Q. "Olu lwakhiwo luphelisa ukuhlengahlengiswa.
Ngokomzekelo wegama elithi "ukuba kwaye kwaye kuphela" oku kuquka iinkcukacha, kufuneka sijonge ngaphandle kweyona nkcazelo ngokubhekiselele kwisampuli yokuphambuka okuqhelekileyo. Isampuli yokuphambuka komgangatho wesetyenzisiwe silingana ne-zero ukuba kwaye kuphela xa zonke ixabiso lwedatha lifana.
Siphula le ngxelo yebiconditional ibe yimiqathango kwaye ixoxisana nayo.
Emva koko sibona ukuba le ntetho ibhekisela koku koku koku:
Ukuba ukuphambuka okusemgangathweni kuyona, ke zonke ixabiso leenkcukacha zifana.
Ukuba zonke ixabiso leenkcukacha zifana, ngoko ukuphambuka okuqhelekileyo kufana nokulingana.
Ukuba sizama ukufaka ubungqina bombonditional, ke ngoko ixesha elide siphelile. Oku kwenza ukuba ubungqina bethu bunamacala amabini. Enye inxalenye esiyibonisa ukuba "u-P ke ngoko Q." Enye inxalenye yobungqina obubonisa ukuba "ukuba u-Q ke ngoko."
Iimfuneko ezifanelekileyo kunye neleyo
Izitatimenti zeBiconditional zihlobene nezimo eziyimfuneko kwaye zanele. Cinga ngolu hlobo "ukuba namhlanje i-Easter, ngomso nguMsombuluko." Namhlanje i-Easter yanele ngomso ukuba yi-Easter, nangona kunjalo ayikho imfuneko. Namhlanje ingaba yiyiphi iCawa ngaphandle kwePasika, kwaye kusasa kusasa ngoMvulo.
Ibinzana elithi "ukuba kwaye kwaye kuphela" lisetyenziswe ngokubanzi ngokwaneleyo kwimibhalo yeemathematika ukuba inemifanekiso yayo. Ngamanye amaxesha i-biconditional kwi-statement yegama elithi "ukuba kwaye kuphela" xa kufutshane ukuba "iff" nje "Ngaloo ndlela inqaku elithi" P ukuba kwaye kuphela xa i-Q "iba" P iff Q. "
Uhlalutyo lweNguquko (ANOVA)
Nguwuphi umzuzu odala umsebenzi we-Random Variable?
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiKomkhulu eziPhambili kwiYunivesithi yaseOhio
Isikhokelo somthengi weevili
20 Amahlaya Oya Kuyiqonda ngokucacileyo Ukuba Uyi-Introvert